သြဂုတ် ၁၂ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်း သိထားသင့်တဲ့သတင်းများ - BBC News မြန်မာ
သြဂုတ် ၁၂ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်း သိထားသင့်တဲ့သတင်းများ
12 ဩဂုတ် 2018
ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Salai Mon Boi
Image caption ပွဲကျင်းပဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ ကရင်ပြည်သူများ
၁။ ကရင့်အာဇာနည်နေ့ ရန်ကုန်မှာ ကျင်းပဖို့အခက်ကြုံ
သြဂုတ် ၁၂ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ၆၈ နှစ်မြောက် ကရင့်အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့မှာ ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထားပေမယ့် တားဆီးကန့်ကွက်တာတွေ ရှိနေတယ်လို့ ကရင်အမျိုးသားတဦးဖြစ်တဲ့ ကိုစောထွန်းထွန်းကဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
အင်းစိန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ ဘုရားကျောင်းတခုမှာ ကျင်းပထားဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် မြို့နယ်အာဏာပိုင်တွေက ကျင်းပမဲ့ ဘုရားကျောင်းကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ဖိအားပေးတာတွေရှိနေတာကြောင့် ပွဲကျင်းပဖို့ အခက်တွေ့နေတာဖြစ်တယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်။
ပွဲကျင်းပဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ မနက် ၁၁ နာရီကျော်အထိ ပွဲကို ကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲ ပွဲအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ထားတာတွေ အလံတွေကိုဖြုတ်ပြီး ဝတ်ပြုတဲ့ပုံစံမျိုးသာခွင့်ပြုနိုင်မယ်လို့ ဆိုတာ ကြောင့် လက်ရှိအချိန်မှာတော့ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကို ကရင်အမျိုးသားအချို့ အပါအဝင်ရန်ကုန်တိုင်း ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးပါ ပါဝင်ပြီး ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ ကိုစောထွန်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
Image caption နယ်မြေလုံခြုံရေးအရ ညမထွက်ရအမိန့်ထပ်တိုး
၂။မောင်တောမှာ ညမထွက်ရအမိန့် သက်တမ်းထပ်တိုး
မောင်တောခရိုင်မှာ နယ်မြေအခြေအနေအရ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိစေအတွက်လုံခြုံရေးလိုအပ်နေဆဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီး မနေ့က (သြဂုတ် ၁၁ ရက်နေ့မှာ) ပုဒ်မ - ၁၄၄ ကို သက်တမ်း ၂လ ထပ်တိုးကြောင်း မောင်တောမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးကနေ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
မောင်တောခရိုင်မှာ ၂၀၁၇ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ ပုဒ်မ - ၁၄၄ အရ ညမထွက်ရ ကန့်သတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုအဲဒီအမိန့်ကို သက်တမ်းထပ်တိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒုက္ခသည် လက်ခံစခန်းတွေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကြည့်ရှု
Image caption သေဆုံးချိန်မှာ အသက် ၈၅နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မစ္စတာ Naipaul
၃။နိုဘယ်ဆုရ စာရေးဆရာ V.S. Naipaul ကွယ်လွန်
ဗြိတိန် နိုင်ငံသားတဦးဖြစ်တဲ့ စာပေ နိုဘယ်ဆုရ စာရေးဆရာ V.S. Naipaul ဟာ လန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေအိမ်မှာပဲ သေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူက အတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
သေဆုံးချိန်မှာ အသက် ၈၅နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မစ္စတာ Naipaul ဟာ နိုဘယ်ဆုအပြင် အခြားသော ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ the Booker prize လိုဆုတွေကိုလည်း ရရှိထားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။